'आउँदो केही महिनाभित्र नेपाल शतप्रतिशत खोप लगाइएको देश हुन्छ'- मन्त्री खतिवडा -
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले केही महिनाभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुर्याउने दाबी गरेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक दलका एउटा सामान्य नेता भनेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार धमलाले तपाईँहरुको अब केपी ओलीसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले भने–‘सम्बन्ध कस्तो हुनु नि, केपी शर्मा ओली सामान्य एउटा राजनीतिक दलका नेता हुन् ।
इमानदारीपूर्वक भए इमानको सम्बन्ध हुन्छ, इमान भएन भने अब बेईमानहरुलाई गरिने सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ ।’ उनले अहिलेलाई खोप पर्याप्त रहेको पनि बताए । प्रस्तुत छ मन्त्री खतिवडासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
होईन, हामी सबैको साझा योजना हो । साझा ढंगले अघि बढ्ने हो । अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रीत गरेको छ । र, गर्नुपनि पर्छ । यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । हामी ठाँउमा छौं, उनीहरुले नै यसको सतर्कता
अपनाउने देखि लिएर आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को भ्याक्सिन केही महिनाभित्रै सबैले पाइसक्नुपर्छ । बालबालिकाको हकमा अझैपनि पर्याप्त व्यवस्था भइसकेको छैन् । १२–१८ वर्षको समूहको लागि तुरून्त प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । अन्य समूहका लागि आउने क्रम जारी छ ।
यसलाई रोक्न हुँदैन् । हामीले केही महिनाभित्र यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । तेस्रो लहर पनि आउने हल्लाहरु आएका छन् । अब त्यसको सत्यतालाई पुष्टि गर्न सकिँदैन् । त्यसका बाबजुद पनि सरकार तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । अर्को नेपालको बजेट, यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका कामहरु
गर्नपर्ने छ ।
एकदम, यस विषयमा सबै जनता निर्धक्क भए हुन्छ । डोनेसन कहाँबाट आउँछ भनेर बस्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारले आफै खरिद गरेर भएपनि नेपाली जनतालाई खोप लगाउने कामलाई हामीले रोक्नुहुँदैन् ।
धेरै ठुला–ठुला च्यालेन्ज पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको दृढताले धेरै अग्ला पहाड पनि चढ्न सकिन्छ । त्यसकारण मूल कुरा भनेको इच्छाशक्ति हो र हामीसँग भएका साधन स्रोतको सदुपयोग हो । दुरुपयोग नगरेर विवाद नआउने गरी काम गर्ने हो । अब विभिन्न कालखण्डमा विवादास्पद गतिविधिहरु पनि भएका छन् ।
स्वास्थ्य उपचारमासमेत विभिन्न अनियमितताका कुराहरु पनि आएका छन् । त्यस्तो अपराधपुर्ण काम गर्न नदिने ढंगले हामीले आफ्नो साधनस्रोतको प्रयोग गर्यौं भने हामीले तपाईंले भनेजस्तो सुधार्न सक्छौं ।
पार्टी त हामी अस्ति भर्खर बैठक बसेका थियौं । ३ महिनासम्म हाम्रो संगठन निर्माण हुन्छ । केन्द्रदेखि वडासम्म नै हामीले संगठन निर्माण गर्छौं । हामीले कार्य बिभाजन पनि गरिसकेका छौं । अब दशैं अगाडी पनि जति सकिन्छ काम हुन्छ । केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी सबैजना आफ्नो काममा जुट्नुभएको छ । दशैंको शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै आ–आफ्नो जिल्ला, गाउँ र टोलमा
सबै साथीहरु लागिरहनुभएको छ । त्यही कार्यक्रमको लागि म अहिले पोखरा जाँदैछु ।
यो आवश्यकताको सिद्धान्तले जन्माउने कुरा हो । अहिले सरकार बनाउने र अगाडी बढ्ने कुरामा संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा यो भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई मिच्ने र थिच्ने जुन काम गरेका थिए, त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएका छौं । अदालतले पनि त्यहीअनुसार संविधानबमोजिमको फैसला गरेको छ । त्यसकारणले संविधानवादलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयत्नमा बनेको
गठबन्धन हो यो । यो गठबन्धन त्यसैगरि अघि बढ्छ ।
तपाईंहरुले नेकपा (एमाले)लाई फुटाउनुभयो तर, गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाउनुभयो हैन ?
उहाँ नेपाली काँग्रेसको पुरानो मान्छे हो । यो प्रधानमन्त्रीज्युको हातको कुरा हो । उहाँले स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नुभएको छ । गजेन्द्रजी माननीयमा पनि उठिसकेको मान्छे हुनुहुन्छ । संसद्मा पनि उमेद्वार भइसक्नुभएको मान्छे हुनुहुन्छ । त्यसकारणले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अधिकार संविधानले पनि दिएको छ । योभन्दा अगाडि पनि बनाएको इतिहास छ ।